Waxaa laga heli karaa Opera 11.61 [Dareenkayga] | Laga soo bilaabo Linux
Waxaa laga heli karaa Opera 11.61 [Dareenkayga]
Nooca ayaa hadda la heli karaa si loo soo dejiyo Opera 11.61 iyo ka dib markii aad soo degsato oo aad muddo tijaabiso (Waxaan ka qorayaa qoraalkan biraawsarkan), Waxaan rabaa inaan ka tago dareenkayga.
Ugu horreyntii waxaa wanaagsan in la tilmaamo qaar ka mid ah wararka:
Cinwaanka dib loo cusbooneysiiyey
Mishiin cusub oo haya
Naqshad cusub oo ku jirta isugeynta boostada.
Khaladkaaga noqo Opera ama maya, wali waxaan dhibaatooyin ku qabaa shaqada gudaheeda WordPress. Faylka cusub ee faylasha badan kujira WordPress 3.3.1, soo bandhigin sidii la rabay. Mana ballaarin karo ama yareyn karo sawir kasta oo ku jira Firefox, si fudud ugu jiidaya dhinacyadeeda. Isla mar ahaantaana, marka sawirku raacayo tilmaantu waxay sii wadaysaa beddelka tilmaamaha fallaarta iyo tilmaamaha xulashada qoraalka, wax aniga iga yara xumaada.
Laakiin haye, wax walba ma xuma. Waxaan haynaa nooc cusub oo lagu rakibey ikhtiyaarro noo oggolaanaya inaan u qaabeyno biraawsarka faahfaahinta ugu dambeysa. Opera sii ahaanshaha isaga Boqorka Maareynta Cache, xawaarihiisu waa mid la yaab leh iyo xamuulka bogga (oo aan lahayn Opera Turbo) runti waa dhakhso oo wareejinta ayaa si la yaab leh u siman markii la hawlgeliyo.
Haddii wax aan jeclaa Opera 11.61 adigaa ah Macmiilka Boostada.
Waxaan jeclaan lahaa iyo wiilasha Opera waxay u bilaabi doonaan sidii codsi madax-bannaan, kaas oo aan shaki ku jirin Thunderbird waa la ilaabi lahaa. Hadda waxay leedahay interface cusub oo leh ikhtiyaarro badan oo habeyn ah oo way ka abaabulan tahay.
Isticmaalku weli wuu yara sarreeyaa laakiin maaha sida qoraalkii hore. Intaa waxaa dheer, waxaan ku tijaabinayay isticmaalka macaamilka emaylka firfircoon iyo dhammaan xulashooyinka caadiga ah. Marka la soo koobo, oo leh Opera 11.61 Waxaan heli doonaa nooc aad uga wanaagsan kuwii hore oo aad u deggan.
Waan soo dejisan karnaa Opera ka xidhiidhkan waayo, Linux, Mac, Windows y dhufto kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Waxaa laga heli karaa Opera 11.61 [Dareenkayga]
Waan cusbooneysiiyay wax walbana wey socdaan 🙂
Opera sifiican ayuu iila shaqeynayay WordPress.
Waxa aan aniga igu habboonayn waa sawirka MacBookga
Nacalad, waa maxay ilmo daahir ah.
Waxaa sidaa yiri isla ninkaas macangaga ah ee igu dhaleeceeyay isticmaalka Mac
Ma aqaano hadday aniga uun igu dhacdo laakiin wax badan baa i cunaya ... ilaa 1,5 Gb oo 3 tab ay furan yihiin ...
Hagaag, xaga xawaaraha waa mid aad ufiican, dhanka isticmaalka xasuusta waa wax yar oo la cunay laakiin aan badneyn, waan ka helay 🙂
Ku jawaab mbrs
Bog furaha aan jeclahay. Marka waxay la mid ahayd rc-da 11.61?
La cusbooneysiiyay oo shaqeynaya ... Sugaya inaan si qoto dheer u tijaabiyo, waxaan u dareemayaa si dhakhso leh, waxayna leedahay adeeg ku dhow 220 megabyte, aad u adag. Si aad u wanaagsan.
Ma aqaano waxay cabi doonto iyo aniga dan kama lihi, waxaan haystaa 8 gb wan ram xd. Maxaa iga farxiyay waa inaan arko google plus oo ugu dambeyntii shaqeynaya, adigoon sameynin hacks qalaad.
Bogsi waafaqid, ma isku midbaa ???
Hadda waan cusbooneysiiyay wax walbana way kafiican yihiin noocyadii hore oo taageero bog fiican leh, way xanuun badan tahay in qaar ka mid ah kuwa ka socda jaamacaddaydu ay halkan ka sii shaqeeyaan.
Ku jawaab kkxbox
La wadaag faylasha oo kula xiriir bogga intarnetka IPTux
Firefox waxay joojineysaa isticmaalka C ++ si ay u isticmaasho Rust, luuqada cusub ee Mozilla